Malunga nathi | I-Xuzhou Hoyer Glass Technology Co, Ltd.
IHoyer Glass sisifinyezo sokusebenzisana kwaphezulu, ukusuka kwinkcazo yomthengi wethu uMichael. Iglasi yeHoyer ikakhulu ebandakanyeka kuphando kunye nophuhliso, uyilo, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nokuthengisa zonke iintlobo zokufakwa kweglasi ekumgangatho ophezulu. Njengomntu obalekayo kunye nombaleki wokuqala kwimveliso yeglasi yeTshayina, ngoku, sisebenza ngamanqaku ali-11 eengilazi enamawaka eentlobo, ezinje ngeebhotolo zokuthambisa, iibhotile zokusela, iiglasi zeglasi, iibhotile zentsimbi, iibhotile z jam, izitya zokutya, iibhotile zesiselo. , iibhotile zamayeza, umxube wejusi, izitya zokuqhekeza iqanda, iipleyiti zeziqhamo, iikomityi, iitafile kunye nezinye izinto ezinxulumene nazo.
Iglasi yeHoyer inemigca yeendibano ezingama-30 kwaye iziphumo zemveliso zonyaka zifikelela kwizigidi ezingama-300 eziqwenga (iitoni ezili-150,000). Sineendibano zocweyo ezi-6 ezinzulu ezinokukwazi ukubonelela ngefrosting, ukushicilela uphawu, ukuphrinta ukutshiza, ukuprintwa kwesikrini, ukukrola, ukukrala, ukusika iinkonzo "zevenkile enye".
Iimveliso zethu ziye zaqinisekiswa yi-SGS, i-CE, i-GE, i-ISO njl.njl kwaye zonwabele ukuthandwa okukhulu kwimarike yehlabathi. Iimveliso zethu zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-30 ahlukeneyo kunye nemimandla, njenge-USA, Australia, Hong Kong, Afrika, Yurophu, Southeast Asia, Middle East nokunye.
Ukoneliseka kwabathengi, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo elula ihlala iyinkampani yenkampani. Samkela ngokufudumeleyo izihlobo ezivela ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba zityelele umzi-mveliso wethu. Kunye neqela lethu elinobugcisa, onoxanduva, elinamandla nelinamava, siyakholelwa ekubeni inkonzo yethu iyakwazi ukunceda ishishini lakho ukuba likhule ngokuqhubekayo kunye nathi.